Zakaria Hussein oo reer Hargeysa ah ayaa ku jiray dugsiga sare waxaanu la mid yahay dhalinyaro kale oo badan oo Soomaali ah oo aaminsan inay u safraan Yurub. Saaxiibo badan ayaa mar hore tegay Yurub waxayna ku dhiirigelinayeen isagga inuu ku soo biro. Isaga iyo laba ay saaxiibo yihiin ayaa aaday Ethiopia.
Xaalada safarka Itoobiya ayaa marba marka ka danbaysa ka sii daraysa. Waxaa la siinnayay cunto aad u yar oo Zakariyena waxuu ka shakiyay tahriibiyeyaashu in ay rabaan in ay iga gaajaysiiyaan si aysan u helin awood ay ku baxsadaan. Suudaan xaaladdu way ka sii dartay oo Zakariye wuxuu bilaabay inuu shaki galo inuu weligiis gaari doono meeshii uu u socday.
“Haday baabuurka sidan waalan u wadaan, werwerka iyo walaaca ugu wayni wuxuu ahaa in aanan meesha aan rabo si nabad ah ku gaadhayn. Miyaa aniga iyo kuwa kale si nabad ah ku gaadhi doonaa meesha? Miyaanu heli doonaa meel amaan ah oo aan ku nasano dhaantayo? Miyan gaadhi doonaa meeshaan u soconay? Taasi waxay ahayd waxaan ka fikirayay ee aan ka werwerraayay”
Waxaa nalaga qaaday Khartuum waxaa nala geeyay xadka liibiya markaasaa naloo gacan geliyay tahriibiyaashii. Safarkii wuxuu socday dhawr ayaamood anagoo sii dhex marayna saxaraha Liibiya. Tahriibiyayaashii waxay ahaayeen kuwo naxariis daran markastana daroogada six un u isticmaalaya.
Markuu gaarigu shil galo waxay si fudud uga tegayeen kuwa dhaawacmay si ay ugu dhintaan saxaraha. Hal dhacdo naxdin leh ayaa ahayd dilka gabar xanuunsatay oo aan sii wadan karin safarka.
"Waxay ahayd in aan tagno, gabadhii baa tidhi ma socon karo. Waxay yidhaahdeen waxaan u yeedhi doona dhakhtar daaweeya. Dhakhtar run ah muu ahayn laakiin tahriibiyayaashu waxay u direen si sun loogu mudo. Waxaana lagu muday anagoo arkayna. Waxaanu u malaynay in la dawayn doono. Laba ama saddex daqiiqo ka dib way dhimatay gabadhii”
Waxay gaadheen xerdii tahriibayaasha halkaas oo ay amreen in ay la hadlaan qoysaskoodii si ay lacag u soo diraan si loo sii daayo. Lacagtii waxay qaadatay in ay ku timaado 20 cisho guddohood .
Zakariyena waxaa loo garaacayay si joogta ah. Ugu dambeyntiina waxaa la geeyay xeebta waxaana loo sheegay inuu raaco doon yar oo aan wax qaadi Karin. Waa la buux dhaafiyay doontii waxaanay ku jireen xaalad quus ah ka dib markay 6 cisho badda ku sii jireen. Markab Liibiyaan ah ayaa yimi si uu u badbaadiyo rakaabkiina waxaa lagu ciliyay Liibiya waxaana la geliyay meel lagu hayo.
Xaaladu waxay ahayd mid naxdin leh. Ku wan wax illaalinayana waxay ahaayeen kuwo arxan daran Zekeriyana wuu xanuunsaday nadaafad daro daraadeed. Markii safiirka Soomaaliyeed uu soo booqday ee uu u soo bandhigay dib u celin Somaliya,` Zakariye wuu farxay waanu aqbalay. Iminka wuxuu ku noqday wadankiisii isagoo dhalinyarda kale uga digaya khatarta Liibiya ee jidka tahriibta.